Gịnị Bụ Ihe kacha mfe Mode Of Travel Na Europe? | Save A Train
Home > Travel Europe > Gịnị Bụ Ihe kacha mfe Mode Of Travel Na Europe?
Ihe mbụ ndị na-eche mgbe ị na-eche Gịnị bụ quickest mode nke njem na Europe na-efe efe. Ma, anyị ga-adabaghịrị! Mgbe ahụ n'ezie efe efe nwere ike ngwa ngwa, ọ dịghị ihe iji nwayọọ karịa ọdụ ụgbọelu aka n'awa ole nke njem oge ị na-azọpụta. Ọ na-agwụ elu na-ọzọ dị oké ọnụ mgbe ị na iburu n'uche na mbanye ọ na-ewe na-esi na ọdụ ụgbọelu, oke! Na-adịghị ọbụna na-anyị malitere na congested okporo ụzọ, humongous ọnụ, na interminable edoghi elele na na-agabiga nche, na Akpa na-azọrọ na-egbu oge n'elu mbata niile tinye elu!
Echere m na anyị nile pụrụ ikweta na ụgbọ njem bụ a dịghị-dịghị! Karịsịa mgbe ị na-atụnyere ya nkasi obi na ị na-na ụgbọ oloko. Adịghị ike ma banyere Gịnị bụ quickest mode nke njem na Europe na-ma? Gụọ na!
Gịnị bụ quickest mode nke njem na Brussels:
The ụzọ kasị mma njem site na Brussels bụ ụgbọ okporo ígwè. Tiketi nwere ike gbaa akwụkwọ site na Save A Train n'ime nkeji na-enweghị zoro ezo ụgwọ. Brussels bụ a na-adọrọ mmasị n'ebe pụtara ije na-adọrọ mmasị mere juru n'ọnụ n'ime okporo ámá niile na alleyway.
Brussels n'ezie nwere ihe maka onye ọ bụla na-enye European staples dị ka art na ije n'akụkụ ndị ọzọ ọhụrụ na-adọrọ mmasị. Ekwela gaa Brussels ma ọ bụrụ na ị bụ na a na-eri ka fries, mọsel, na biya na-adịghị anya unu imikpu. The akụkụ kasị mma banyere Brussels bụ na ọ bụ na-super iji ụgbọ okporo ígwè na ị nwere ike ịga ndị ọzọ n'obodo n'ime Europe mfe na ngwa ngwa. Anyị mere ná mgbakọ na mwepụ maka ị 😉
Njem site Brussels na Paris
The njem site Brussels na Paris ike ga-agwụ agwụ site na ụgbọ okporo ígwè na dị n'okpuru 1:30 h. Ugboro kpọmkwem ụgbọ oloko pụọ Brussels-abata na Paris’ Gare du Nord nile ụbọchị. Flights si Brussels na Paris’ Charles de Gaulle Airport weghara 5 awa mgbe ọdụ anwu ugboro na-e echiche.
Flight Oge – 5:30h
Zụlite Site Brussels na Paris Oge – 1:22 h
Oge Zọrọ: 4:08 h
Njem site Brussels na London
The njem site Brussels na London ike ga-agwụ agwụ n'ime nanị ihe karịrị 2 awa. The kasị usoro iga na-ejegharị ejegharị ụgbọ okporo ígwè, na Ugboro kpọmkwem Eurostar ụgbọ oloko rutere na London si St Pancras ebe nile ụbọchị. Flights si Brussels na London Heathrow Airport weghara 5 awa mgbe ọdụ anwu ugboro na-atụle.
Zụlite Site Brussels na London Oge – 2:18 h
Flight Oge – 5:36 h
Oge Zọrọ: 3:18 h
Njem site Brussels ka Amsterdam
njem site Brussels ka Amsterdam ewe nanị n'okpuru 2 awa ụgbọ okporo ígwè. Ugboro kpọmkwem ụgbọ oloko na-abata na Amsterdam si Central Station nile ụbọchị. Flights si Brussels ka Amsterdam nke Schiphol Airport weghara 5 awa mgbe ọdụ anwu ugboro na-e echiche.
Zụlite Site Brussels ka Amsterdam Oge – 1:50 h
Flight Oge – 5:05 h
Oge Zọrọ: 3:15 h
Njem site Brussels ka Lyon
The njem site Brussels ka Lyon-ewe ihe dị 3:30 h. The kasị usoro nke iga na-ejegharị ejegharị ụgbọ okporo ígwè, na Ugboro kpọmkwem ụgbọ oloko rutere Lyon nile ụbọchị. Flights si Brussels ka Lyon buru dị n'okpuru 6 awa mgbe ọdụ n'ụzọ na-eche ugboro na-gụnyere.
Zụlite Site Brussels ka Lyon Oge – 3:29 h
Flight Oge – 5:50 h
Oge Zọrọ: 2:21 h
Njem site Brussels na Frankfurt
Ọ na-ewe nanị ihe karịrị 3 awa njem ụgbọ okporo ígwè si Brussels na Frankfurt. Direct ụgbọ oloko na-abata na Frankfurt ugboro ugboro nile ụbọchị. tụnyere, flights si Brussels ka Frankfurt weghara 5 awa mgbe ọdụ n'ụzọ oge ẹka echiche.
Zụlite Site Brussels na Frankfurt Oge – 3:05 h
Flight Oge -5:15 h
Oge Zọrọ: 2:10 h
Gịnị bụ quickest mode nke njem na France:
Onye na-adịghị hụrụ n'anya France? Anyị na e dere ọtụtụ blọọgụ na nke kacha mma akụkụ nke France. site Atụmatụ maka njem ụgbọ okporo ígwè si Paris na Nice to Where you can chọta ndị kasị mma French fries na France ma ọ bụ Michelin Star ụlọ oriri na ọṅụṅụ na France ma ọ bụrụ na ị na-ahọrọ. Ọwọrọ, ị na-etinyecha chọrọ inwe n'ebe ahụ dị ka n'oge na-adịghị dị ka o kwere! Ihe kacha mfe ụzọ na-e? Ụgbọ okporo ígwè nke N'ezie!
Train njem na France bụ kasị dị irè ụzọ nke na-aga site na Paris obodo ndị ọzọ na France. Travel from Paris to the south of France–albeit a bit pricey–is best done by train; ụgbọelu na ụgbọ okporo ígwè ahịa a tụnyere, ma ụgbọ okporo ígwè njem nnọọ obere nke a hassle.
Mgbe bọs ma ọ bụ ịnyịnya-òkè dị ọnụ ala karịa, ego nke awa ọ ga-bụ nnọọ ihe bara uru. Ihe kacha mfe mode nke njem na Europe bụ mgbe ụgbọ okporo ígwè, ma na-gburugburu France ọ dị iche iche!
Ebe a na-oge na-azọpụta ihe atụ:
The njem site Amsterdam na Paris nwere ike ga-agwụ agwụ na ihe 3.5 awa. Ihe kacha mfe mode nke njem bụ a elu-ọsọ ụgbọ okporo, na Ugboro kpọmkwem ụgbọ oloko rutere Amsterdam Centraal Station nile ụbọchị. Flights si Paris’ Charles de Gaulle Airport ka Amsterdam nke Schiphol Airport buru ihe 4 awa mgbe ọnụ anwu ugboro na-atụle.
Zụlite Site Amsterdam na Paris Oge – 3:26 h
Flight Oge – 4:05 h
Oge Zọrọ: 0:39 h
Njem site London na Paris
I nwere ike ịgacha n'etiti United Alaeze na French n'isi obodo na nanị ihe karịrị 2 awa. Ihe kacha mfe mode nke njem bụ a elu-ọsọ ụgbọ okporo ígwè si St. Pancras Station. Ị ga-ahụ ugboro ugboro kpọmkwem ụgbọ oloko rutere na Paris’ Gare du Nord nile ụbọchị. flights si London na Paris iri ihe 4 awa mgbe ọdụ anwu ugboro na-atụle.
Zụlite Site London na Paris Oge – 2:16 h
Flight Oge – 3:57 h
Oge Zọrọ:1:41 h
Train njem bụ kasị mma usoro nke njem na site otu obodo ọzọ na Netherlands. Prices are relatively inexpensive as you can book a ticket through the Save A Train website si Amsterdam na Rotterdam maka banyere 15 euro na Amsterdam na Hague (Den Haag Central) maka gburugburu 11 euro.
Njem site Amsterdam na Düsseldorf site Train:
Ọ na-ewe ihe dị ka 2 awa gaa n'etiti Amsterdam Düsseldorf ụgbọ okporo ígwè. Ugboro kpọmkwem ụgbọ oloko na-abata na Amsterdam Central ojii nile ụbọchị. Flights si Düsseldorf ka Amsterdam nke Schiphol Airport weghara 3 awa.
Zụlite Site Amsterdam na Düsseldorf Oge – 2:13 h
Flight Oge – 3:10 h
Oge Zọrọ: 0:57 h
Ọnụ Ọgụgụ na-adịghị na-edina! The oge ego ekwu maka onwe ha! The quickest mode of travel in Europe is by Train. Gaba na n'elu ka anyị Zọpụta A Train website chọta ndị kasị mma ahịa, na sekọnd!
Ị chọrọ Embed anyị blog post jidesie gị na saịtị, ị nwere ike ma buru anyị na foto na ederede na dị nnọọ na-enye anyị n'aka na a njikọ a blog post, ma ọ bụ na ị pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fquickest-mode-travel-europe%2F%3Flang%3Dig- (Pịgharịa gaa na ala a obere ịhụ Embed Usoro)
#airtravel #na-efe efe #mode of travel eurostar trainjourney Train Travel ụgbọ okporo ígwè njem